KMS 2019 — Kônferansa Momba ny Soratra 2019
Kônferansa andiany fahatelo
Kônferansa Momba ny Soratra 2019
9 Novambra, Antananarivo, Madagasikara Hividy Tapakila
Ireto ambany ireto ny anaran'ireo mpanao velakevitra mandritra ny KMS 2019.
Rasolondraibe Ando Nantenaina na Voniary dia mpiblaogy, namorona sy mitantana ny Blaogin'I Voniary. Efa tia nanoratra tantara foronina tamin'ny teny Frantsay i Voniary fony fahakeliny ary nandray anjara tamina fifaninana maromaro.
Araho Voniary —
RAJAONARIVONY Hasina na Gaby Kely dia mpanoratra. Nanomboka nanoratra tamin'ny taona 1991. Mpikambana ao amin'ny Havàtsa-UPEM. Boky tononkalo nosoratany: Pi-maso (2017), Todim-pitia (2018), Tsara Andriamanitra (2015). Boky fanadihadiana nosoratany: Vilany mitongilana.
Araho Gaby —
RAHOILJAON Harinaivo Maminirina Tiana Mickaël na Jirom-panahy dia nanomboka nanoratra ny taona 2016 ka teo amin'ny sehatry ny tononkalo no nanoratana voalohany. Tamin'ny taona 2018 vao nanoratra tantara an'ojam-peo. Tao amin'ny Olivasoa Radio 91.0 FM no namoahany ireo tantara nosoratany.
Araho Jirom-panahy —
RASOANIVO Faralalaina Elia Olsenie, na Poety Rebely dia mpanao slam-poezia. Poety Rebely satria zava-misy mandonandona sy teny mavesabesatra no avoakany sy ampiasainy, ary mba tsy ho tampoka be amin'ny mpamaky sy ny mpihaino ny fihainoana azy.
Araho Poety —
MBOLANANTENAINA Marie Nathalie na Mihanta dia nanomboka nanoratra ny taona 2017. Tononkalo no tena manavanana azy. Maro ny hetsika nandraisany anjara. Santionany amin'izany: Sakoroka (31 Jolay 2019), Hirika (07 Aogositra 2019), Sakoroka 2 (28 Aogositra 2019), izay samy tao amin'ny Ivokolo Cemdlac avokoa. Mbola mpianatra izy ary ao amin'ny kilasy famaranana.
Araho Mihanta —
Ny handrindra ny kôferansa amin'ity andiany fahatelo ity dia Riambola Mitia. Hitatsika eto ambany eto ny mombamomba azy.
Riambola Mitia dia Poeta, Mpanoratra tononkalo sy sombintantara. Miezaka manandratra ny Haivolana sy Haisoratra ary ny teny Malagasy. Nandalina momba ny zavaboahary. Mpandrindra ny Faribolana Sandratra Antananarivo. Efa namoaka boky maro.
Araho Riambola —
Tantara an'onjampeo: Ny tantarany sy ny olan'ny mpanoratra ary ny teknikam-panoratana.
Teknika sy torohevitra fomba famoronana slam-poezia.
Teny Gasy 2.0: Ny teny Malagasy any amin'ny Aterineto.
Ny asasoratra ankehitriny: ny firoborobony, ny olany, ny vahaolana azo aroso.
Ny tsipelina sy ny fitsipi-pitenenana manoloana ny asasoratra ankehitriny.
Ireto daholo ny mpanohana ôfisialy ny KMS 2019. Ankoatr'ireo dia maro dia maro ireo olon-tsotra sy fikambanana izay miara-miasa amin'ny fanatontosana ny kônferansa.